HTTP Live Streaming Player: Atụmatụ 5 I Kwesịrị Knowmara | Martech Zone
HTTP Live Streaming Player: Atụmatụ 5 Need Kwesịrị Knowma
Wenezdee, Machị 20, 2019 Wenezdee, Machị 20, 2019 John Smith
HLS ọkpụkpọ nke a makwaara dị ka HTTP ndụ gụgharia bụ usoro nkwukọrịta nke sitere na Apple na mbụ e mere nanị maka Apple ngwaọrụ ma n'ikpeazụ ọ ghọrọ dakọtara na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka nke ọma. N'etiti atụmatụ dị iche iche kwesịrị ịja mma, HTTP ndụ gụgharia n'elu ikpo okwu na-eji mgbanwe gụgharia teknụzụ nke lekwasịrị ndị debanyere aha ya anya site n'inye ha ọrụ elere na ọrụ ntanetị gafere ngwaọrụ Apple niile.
Kedu ihe kpatara anyị ji aga maka teknụzụ HLS Player?
Tupu anyị wụfee na bandwagon nke iji ihe Onye ọkpụkpọ HLS ka anyị buru ụzọ hụ isi ihe ndị mere mmadụ ga-eji na mbụ.
Ndakọrịta - HLS ọkpụkpọ nwere nnukwu ebe niile na-akwado ihe nchọgharị ọ bụla gụnyere gụnyere ma ọnweghị oge, Safari, nchọgharị Google Chrome, Microsoft Edge, Linux na Microsoft nyiwe nke na-eme HLS nhọrọ kachasị mma n'etiti ndị asọmpi ya.
Ightzọ kwụ ọtọ HLS gụgharia na-anapụta ọdịyo na vidiyo ọdịnaya na ịntanetị na enweghị ụzọ. Imirikiti ọrụ vidiyo ọkpụkpọ gụgharia nke dị na ahịa taa ka achọrọ ịgafe usoro nhazi arụmọrụ sitere na nhazi ngwaike na ngwanrọ ngwanrọ mana n'aka nke ọzọ, HLS gụgharia anapụta ya na ngwaọrụ niile site na faịlụ M3U8. M3U8 faịlụ nwere ebe faịlụ mgbasa ozi dị n'ụdị ndepụta ọkpụkpọ, ebe a na-echekwa ya dị ka ụzọ faịlụ na igwe mpaghara na URL maka iyi egwu.
Na-akwado ndị emechiri emechi - Ndị egwu HLS nwere mpempe akwụkwọ emechiri emechi ma tinye ya na iyi ụgbọ njem MPEG-2.
Kedu ka HLS Player si arụ ọrụ?
The HLS ọkpụkpọ tumadi mejupụtara atọ, nke mbụ bụ ihe nkesa, nke abụọ bụ ndị na-ekesa ihe na njedebe bụ sọftụwia ndị ahịa.
HLS Egwuregwu vidiyo ihu ọma ọkọkpọhi ọsọ ọsọ nke ọdịyo na video iyi encrypts ha digitally na encapsulates na a dakọtara usoro.
Na-esote na mpaghara nkesa nke na-akwado usoro nke sava weebụ, na-enweta arịrịọ onye ahịa ma zighachiri ha n'ụdị faịlụ ndeksi.
N'ebe a, onye ahịa ahụ na-agụ faịlụ ndeksi ma rịọ maka ọdịnaya achọrọ nke a na-ekekọrịta na ngalaba. Site n'enyemaka nke Network Distribution Network (CDN), a na-ejide arịrịọ na azịza ndị a niile n'ime oghere. Nke a na - ebenata ibu nke sava weebụ dị ukwuu mgbe ndị ahịa ndị ọzọ rịọrọ ụdị data ahụ.
Akụkụ nke HLS Player
HLS ọkpụkpọ bụ ndabara ụkpụrụ maka niile ọdịyo na video gụgharia ruru ya dị iche iche atụmatụ nke enhances ikiri ahụmahụ enweghị ihe ọ bụla echekwa.
Na-agbanwe Bitrate Gụgharia - Ma ị na-eji wired netwọk ma ọ bụ ikuku na-agbanwe agbanwe bitrate gụgharia technology na-enye ohere ka ndị ọrụ imeghari dị iche iche na-agba àgwà dynamically na ana achi achi magburu onwe gụgharia àgwà enweghị ihe ọ bụla nkwụsị. A na-ahụta ndị egwu HLS dịka otu kachasị mma nyiwe vidiyo vidiyo ebe ndị ọrụ nwere ike ịnweta foto zuru oke mma site n'enyemaka nke teknụzụ HLS ndị a na obere bitrates yana ọ nwere ike ịnapụta Html5 ndụ gụgharia vidiyo dị na enweghị ụzọ. N'ihi ya, HLS technology ka dị ka ọlaedo ọkọlọtọ maka ndụ gụgharia ọdịyo nakwa dị ka video ọdịnaya.
Otutu usoro Player - N'oge na oge a, gụgharia vidiyo ọkpụkpọ ga-enwe ike ịnapụta ọdịnaya dị oke mma n'agbanyeghị ngwaọrụ ha nwere ike ile dị mkpa. The HLS playeruses ndị kasị ugbu a gụgharia protocol maka media gụgharia nke na-eji nkà na ụzụ ọhụrụ. HLS iyi na smartphones, mbadamba, PC na ihe ọ bụla na ngwaọrụ ndị ọzọ na ụdị ọ bụla dị ka MP4, M3U8 ma ọ bụ MPEG dash ma ọ bụ n'ụdị ọ bụla ọzọ.
HLS & Dash Na-agbanwe - DASH bu ihe nlere na-agbanwe agbanwe nke na-anọchi usoro HLS. DASH na-agbanwe agbanwe na-enye usoro ntanetị mba ofesi nke dabere na usoro HTTP. Tinyere HLS na Dash Adaptive streaming technology, a ga-anapụta ọdịnaya ndị a na-enweta site na sava weebụ ọ bụla dị na ntanetị.
Multi-bitrate HD ngbanwe - Teknụzụ HLS na-eji teknụzụ na-etinye ọtụtụ ọnụọgụ ọnụọgụ ebe etinyere isi iyi vidiyo ma tinye ya n'ime bitrates dị iche iche ma gbasaa na Network Development Network ahọrọ. Typedị multi-bitrate a ma ọ bụ ọtụtụ iyi na-eme ka ndị a na-egwu egwu vidiyo na-egosi n'etiti ndị na-asọmpi ya. Ihe ndị a na-emekwa ka ndị na-ekiri ha họrọ iyi dị ka bandwit ha si enweghị ụzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye na-ekiri ya nwere nnukwu bandwidth, ha nwere ike ịhọrọ 1080p60 ma ọ bụ maka bandwidth ọkara ha nwere ike ịhọrọ 480p ma ọ bụ 360p na na.
HLS izo ya ezo gụgharia - N’ezie, izo ya ezo HLS na-eji usoro ezoro ezo AES ebe faịlụ vidiyo na-ezo ezo site na iji algorithms pụrụ iche. HLS encryption streaming na-eji ọtụtụ ụzọ dị irè iji hụ na ezoro ezo data gafee usoro HTTPS na-enweghị ekpughere igodo ahụ ozugbo na faịlụ ahụ gosipụtara.
Ngwa ngwa playback - Oge playback dị oke mkpa maka ihe ọkpụkpọ vidiyo ọ bụla na - egosi HLS na teknụzụ na - enye ngwa ngwa ngwa ngwa site na enyemaka nke amazon ọrụ ntanetị na efu efu.
HLS ọkpụkpọ na-enye njedebe njedebe nkwado nye ndị ọrụ nwere ogo impeccable ma sie ike n'etiti usoro ndụ iyi ndị ọzọ. Na mkpokọta, HLS gụgharia teknụzụ nwere ọtụtụ elele dị ka usoro gụgharia mgbanwe, na-akwado nyiwe dịgasị iche iche, nwere ọnụọgụ ọtụtụ-bit nke nwere ike ịnapụta na desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka dịgasị iche.
Egosiputara bụ otu n'ime ndị kacha mma HLS na ahịa taa nke na-enye atụmatụ ndị na-akpali akpali nke dị na teknụzụ kachasị elu nke na-enye ndị ọrụ ezigbo ahụmịhe ọhụụ. Na ọsọ playback ọsọ, Vplay iyi ndị videos na ọdịyo ọdịnaya na a nwetara ígwé ojii Bochum gburugburu ebe obibi.
Lelee VPlayed HLS Player
Tags: 1080pNa-agbanwe Bitrate Gụghariamgbanwe gụghariacccdnahịa playbackmechiri emechinkesa ọdịnaya ntanetịgbaaradash agbanwehls na-agbanweHls zoro ezoHls zoro ezo gụghariaOnye ọkpụkpọ hlshttp ndụ gụghariaebi ndụNw3na-egosipụtamedia ngbanwemulti-bitrate hd ngbanweotutu ọkpụkpọ usorongalabavideo ndụ gụghariavideo playbackgosiputara
John nwere afọ 4 + nke Ahụmahụ dị ka Video On Demand (VOD) Expert. Ọ na-amụ mgbe niile na ịkekọrịta teknụzụ ọhụụ na Video On Demand Industry
Xara: Mepụta akwukwo eji eme ihe nke oma na nkeji
Webzọ Ntube Ntanetị Dị Mkpa iji tinye na Weebụ Iwu Iwu Gị